Tsidiho i Britain IZAO raha Vaksiny ianao! Ny filoha jeneralin'ny ETOA, Tom Jenkins dia maminany ny fanarenana ny fizahan-tany
Home » Lahatsoratra farany farany » Vaovao Mafana Eoropeana » Tsidiho i Britain IZAO raha Vaksiny ianao! Ny filoha jeneralin'ny ETOA, Tom Jenkins dia maminany ny fanarenana ny fizahan-tany
Vaovao Mafana Eoropeana • Vaovao Mafana • Vaovao Mafana US • Fitsangatsanganana an-trano • Vaovaom-panjakana • Vaovao momba ny fahasalamana • Hospitality Industry • Interviews • Vaovao • People • fanorenana • Tourism • Dinika fizahan-tany • Fanavaozana ny tanjon'ny dia • Travel Wire News • malaza ankehitriny • Vaovao farany momba ny UK • Vaovao isan-karazany
Ny Fikambanan'ny fizahantany eropeana (ETOA) dia misolo tena ny ampahany lehibe amin'ny indostrian'ny fizahantany sy fizahan-tany eoropeana. Ny CEO an'ny ETOA, Tom Jenkins, dia maherifo ihany koa amin'ny fizahan-tany amin'ny World Tourism Network Hero Award Program ary niresaka sy niteniteny foana nandritra ny krizy COVID-19.
IZAO dia midika hoe 2 Aogositra 2021. Ny WHO dia midika fa ny mpitsidika avy any Etazonia sy ny Vondrona eropeana - fa tsy ny olom-pirenena frantsay - dia tsy mila hatokana ho any ivelany rehefa mandeha any Angletera.
Mihatra amin'i Angletera ny lalàna vaovao, ary nilaza ny hanatanteraka izany ny fitondrana any Scotland sy Wales.
ETOA Mihevitra ny Tale Jeneraly Tom Jenkins fa taraiky kely ho an'i Angletera ity, saingy hanampy, satria nanampy ny toeran'ireo vondrona eropeana hanomboka fanarenana fizahan-tany izany.
Mitsangatsangana any Britain indray atsy ho atsy, fa tsy raha frantsay ianao.
Taorian'ny fanambarana nataon'ny governemanta UK hamela ny olom-pirenena vita vaksiny feno ao amin'ny Vondrona eropeana (UE) sy Etazonia hiditra ao Angletera tsy misy fameperana, Tom Jenkins, tale jeneralin'ny Fikambanan'ny fizahan-tany eropeana (ETOA) nanao hoe:
“Navelan'ny UK tara loatra ny fampijanonana ireo tanjona kendreny manokana. Ny 80 isan-jaton'ny fitsidihana rehetra avy any Etazonia dia mitranga eo anelanelan'ny volana Janoary-septambra, izay ny volana faratampony dia ny volana septambra, ny fotoana manodidina ny fialantsasatry ny fetin'ny asa amerikana.
"Nanampy an'i Etazonia tamin'ny 'lisitra fotsy' nataony ny volana jona, ary ny mpikambana ETOA dia afaka namonjy ny ampahany tamin'ny vanim-potoana tamin'ny fivarotana fonosana fizahan-tany miditra any amin'ny firenena eropeana ekena ho an'ny Amerikanina. "
Nisy mpitsidika amerikana maromaro tonga tamin'ny Jolay, maro hafa no hanao izany amin'ny volana Aogositra. Ary ny zava-drehetra dia natao ho an'ny vanim-potoana fivezivezena mandritra ny volana septambra any amin'ny faritr'i Schengen. Any Angletera, ny protokolon'ny famandrihana dia midika fa efa nofoanana ny volana Aogositra sy septambra. Nanjavona ny vanim-potoana nivoakany ny UK tamin'ny fiandohan'ny volana Jolay.
“Hisy ny fanarenana. Famandrihana minitra farany no hitranga any London. Hotanterahina ny sasany amin'ny orinasan'ny volana oktobra. Saingy ny fidiran'ny mpitsidika amerikana izay mitranga any amin'ireo tanàna sy faritra ao amin'ny EU dia tsy hitranga any UK amin'ny 2021, "hoy hatrany i Jenkins.
Tamin'ny volana septambra 2020, Tom Jenkins dia nanome topimaso momba ny State of Tourisme ho an'i eTurboNews.